Wafdi uu hogaaminayo Gudoomiyaha M. Afrika oo Muqdisho booqdey (Sawiro) – SBC
Wafdi uu hogaaminayo Gudoomiyaha M. Afrika oo Muqdisho booqdey (Sawiro)
Wafdi ka socda ururka midowga Afrika ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, kuwaasi oo kulamo kala duwan la teeshey madaxda ugu sareysay ugu dawlada KMG Soomaaliya.
Wafdigan oo uu hogaaminayey gudoomiyaha midowga Afrika Jean Ping waxay xarunta madaxtooyada kulan kula qaateen Madaxweynaha dawlada KMG, Gudoomiyaha Baarlamanka, Ra’isalwasaaraha & wasiirka arimaha dibada waxaana ay ka wada hadleen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan madaxtooyada arimaha siyaasada, amaanka & abaarana.
Kulanka ay labada dhinac yeesheen markii uu soo dhamaaday waxaa shir jaraa’id saxaafada u qabtey si wadajir ah Madaxweynaha & Gudoomiyaha midowga Afrika iyagoo ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin socdaalka wafdigan waxaana uu sheegay in tani ay tahay natiijada ka soo baxdey guulaha ay gaareen ciidamada dawlada & kuwa AMISOM oo uu sheegay inay amaanka Muqdisho wax weyn ka qabteen, isagoo u mahadceliyey una rajeeyey inay sii wadaan hawlahooda.
Madaxweyne Shariif ayaa sheegay in 25-ka bishan lagu qaban doono Magaalada Addis Ababa caasimada Itoobiya kulan uu soo qaban qaabiyey ururka Midowga Afrika kaasi oo looga hadlayo abaarahaka taagan Soomaaliya, isla markaana dhaqaale loogu uruurinayo waxaana uu sheegay in shirkaasi uu yahay mid fursad ah.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Mr Jean Ping ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in magaalada Muqdisho uu yimaado, waxaa uu xusay in sanadkii hore iyo sanadkan ay ay ka muuqato isbadal balaaran oo ay horumar sameeyeen Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda ee dagaalada kula jira kooxaha mucaaradka.
Jen Bing wuxuu farta ku fiiqay in dawlada Al-Jeeriya ay ugu deeqdey dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen lacag gaaraya 10 milyan oo doolarka Mareykanka, iyadoo lacagtaasi lagu bixin doono shirka abaaraha Soomaaliya ee uu soo qaban qaabiyey ururka Midowga Afrika ee Adis Ababa lagu qaban doono.
Sidoo kale wuxuu sheegay in wadamada Ghana & Gabon oo ka mid ah Afrika ay bixiyeen balanqaadyo ku aadan inay dhaqaale ku bixin doonaan hawlaha gargaarka abaaraha Soomaaliya.
Gudoomiyaha Midowga Afrika Jen Bing wuxuu ugu baaqay wadamada caalamka inay Soomaaliya maalgashi ku sameeyaan isagoo si gaar ah u xusey wadamada Shiinaha, Brazil & Hindiya, isla markaana ay ka qayb qaataan arimaha bini’aadamtinimada ee Soomaaliya.
Wafdigan ka socda midowga Afrika ee Muqdisho yimid ayaa ka qayb ah wafuud heer caalami ah oo mudooyinkii ugu dambeeyey ku soo qulqulayey caasimada.